एकान्तवासका विद्यार्थीलाई शिक्षकको पत्र |
२०७७ श्रावण २८ गते, बुधबार २१:३७ मा प्रकाशित
प्यारा बिद्यार्थी भाइबहिनीहरु,
तिमीहरुसित भेट नभएको लगभग ५ महिना भैसक्यो । कोभिड १९ को महामारीले सबैतिर अस्तब्यस्त बनायो । त्यसले सबैलाई प्रभावित पार्यो । तिमी हामी कोही पनि अछुत रहन सकेनौ । तिमिहरुसित सँगै बसेर भलाकुसारी गरी सिकाउने चाहाना हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिले गर्दा सकिएन । तिमि हामी सकुशल रहनु पर्यो । केही दिन पछि अवश्य भेटौला हुन्न !
तिमीहरु के गर्दै छौ ? घरमा कति समय पढाइलाई दिएका छौ ? आमा बुवा घरको शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँहरु सँग बसेर सिक्ने अवसर पाएका छौ । उहाँहरुबाट घरायसी कामका कुरा सिक्ने बानी बसाल । बिद्यालयबाट किताब त पायौ नि ! नपाएको भए बिद्यालयमा सम्पर्क गर । पाएका छौ भने समय तालिका बनाएर पढ्ने बानी गर । डिसहोम टेलीभिजनका विभिन्न च्यानेलले तिम्रै किताबका पाठ अनुसार पढाउने काम गरिरहेका छन् ।
के तिमीहरुलाई थाहा छ ? भेरीगंगा एफ. एम.ले पनि त हरेक बिहान ७.३० देखि १०.३० सम्म कक्षा ८, ९ र १० का बिषयहरु पढाइ रहेको छ । बुवा आमासँग सल्लाह गरी पढ्ने गर ल । आफूलाई मन पर्ने जुन पुस्तक पनि किनेर पढ्न सकिन्छ । बगेको पानी र बितेको समय फर्केर कदापि आँउदैनन् । तसर्थ, भाइबहिनीहरु समय त्यतिकै खेर नफाल है ।
शारदा मा.वि. छिन्चु, सुर्खेत
Previous articleभेरीगंगा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम शुरु
Next articleआजदेखि सवारी पास वितरण बन्द, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाइने